Ngwa foto kacha mma nke izu | Akụkọ Ngwa
Akụkọ akụrụngwa | 26/10/2021 19:29 | Foto
Foto aghọwo ụzọ kachasị mma iji mee njem anwụghị anwụ, nri ezinụlọ, ụbọchị ọmụmụ, oriri na ọṅụṅụ, na-echekwa oge ruo mgbe ebighị ebi. N'ihi ọganihu nke nkà na ụzụ, ọ ga-ekwe omume ịmepụta foto ngwa ngwa na ngwa ngwa. Taa, anyị ga-egosi gị ngwa kacha mma iji bipụta ncheta kacha mma, na site n'ụlọ na-eji naanị otu ngwa.
1 Ngwa nke izu a
1.2 Otu esi eji ngwa Hofmann?
1.4 Mbipụta n'efu
Ngwa nke izu a
Ụlọ ọrụ nke jisiri ike bụrụ otu n'ime ndị ndị isi ahịa, ebe ọ bụ na 1923 na-emepụta ihe ọhụrụ ma na-emegharị onwe ya. Onye okike nke Hofmann bụ onye German gbapụrụ na Valencia na 1923, na-amalite azụmahịa foto, na-amalite ịmepụta ọba ọdịnala, ọ gaghị adị ruo 2005 mgbe ha malitere na ahụmahụ dijitalụ, na-enye ohere ịmepụta albums dijitalụ. Ugbu a ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-aga n'ihu na Valencia ma na-aga n'ihu na nzọ na nkà na ụzụ na foto ka Hofmann na-aga n'ihu na-abụ onye ndu na ngwaahịa foto.
Hofmann akwụsịbeghị imepụta ihe ọhụrụ, na-enye ngwaahịa ugbu a karịa foto ọdịnala. N'ụzọ dị otú a, ngwaahịa ọ bụla nwere ike ịhazi ya naanị na ole na ole clicks: iko, akwụkwọ mmado, mgbagwoju anya, eserese. akwa akwa akwa, mkpuchi na ọba dijitalụ. Na 2013 ngwa mkpanaaka kụrụ ahịa nke na-enye gị ohere ịmepụta ebe nchekwa mbụ n'ụzọ dị mma ma dị mfe. Naanị ị ga-ahọrọ foto na ngwaahịa ịchọrọ ịmepụta. N'afọ ndị na-adịbeghị anya, ihe nkuku aghọwo otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị ewu ewu.
Otu esi eji ngwa Hofmann?
Hofmann dị ma na ụdị ya maka gam akporo yana maka Apple. Ọ bụghị ngwa na-atụ oke ibu, nke na-enye ohere ibudata ya na ngwaọrụ ọ bụla. Ngwa na-enye gị ohere foto obibi, mepụta ọba, chepụta kalenda, hazie iko. Ọ dịghị mkpa ịnweta weebụ site na mkpanaka, ihe niile nwere ike ime, si otú ahụ na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ dịkwuo mma ma na-akwalite nkasi obi mgbe niile. Ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị ebudata na Spain ma ọ nwere ngwaahịa niile enwere ike ịhụ na webụ. Enweghị oke, mepụta na chepụta mgbe ọ bụla ịchọrọ ya ma mee ka ncheta gị bụrụ ihe na-echefu echefu.
N'afọ ndị na-adịbeghị anya, Hofmann ewepụtakwala a ngalaba onyinye nke na-enye ndị ahịa ohere ịhọrọ site na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ngwaahịa ndị a na-emezi emezi: egwuregwu tebụl, akwa akwa akwa, akpa ụlọ mposi, akpa azụ ... Ụlọ ọrụ ahụ jisiri ike nye ọtụtụ ngwaahịa ndị na-eme mgbanwe na onyinye dị ugbu a. Na mgbakwunye, ha nwere ngalaba mkpali atọ iji nye na ụbọchị ọmụmụ, agbamakwụkwọ ma ọ bụ ndị enyi. Ebumnuche bụ ka onye ọrụ chọta onyinye zuru oke.
La Hofmann ngwa nwere a dị nnọọ mfe na mara mma interface. Ọ dị mfe ịnyagharịa na bụ nnọọ kensinammuo, onye ọ bụla ngwaahịa na-adị mfe hụrụ na navigability na-ezukọ niile chọrọ nke mere na onye ọrụ adịghị ina efu na nke ọ bụla nzọụkwụ. Na mgbakwunye, ị nwere ike ijide n'aka na Hofmann nwere ọmarịcha mbipụta na foto ya, yabụ na ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla. Ị ga-enwe obi ụtọ na ngwaahịa ị na-arịọ, Hofmann bụ otu ihe na ezigbo mma na ezigbo ọrụ.
Hofmann - Foto foto
Cheerz bụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-eduga, n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ nwetara ntakịrị ọnụnọ n'ahịa maka ya nnukwu mmekorita na influencers. Ụlọ ọrụ ya dị na Paris. A mụrụ ya na 2012 ma kemgbe ahụ ọ kwụsịbeghị ịmepụta na ịmepụta ihe ọhụrụ, ịkụ nzọ na otu ndị na-eto eto nke chọrọ iji weghara ụwa. Ọ bụ otu n'ime ndị asọmpi Hofmann ma na-esochi nzọụkwụ ya anya. Cheerz na-enyekwa ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaahịa na-adọrọ mmasị: foto, ọba, igbe foto, magnets bụ ngwaahịa kpakpando ya na kalenda.
N'afọ gara aga, ha agbanweela agba ha ịkụ nzọ na-acha anụnụ anụnụ na odo ma na-enye mgbanwe na ihe oyiyi akara ha. Ha nwekwara ngwa mkpanaka nke na-adaba na ngwaọrụ ọ bụla na-enye ohere zụta ngwaahịa gị ngwa ngwa na adaba. Ọ dị mfe iji na ịnweta dị ka na weebụsaịtị gị, na-enye gị ohere ibipụta foto niile ịchọrọ site na mkpanaka gị na ịmepụta ngwaahịa pụrụ iche. Gbalịa ngwa ahụ wee hụ n'onwe gị ngwaahịa niile ha nwere yana ogo ha dị elu.
Freeprints dị na Texas, mana ejikọrọ na mba ụwa na ọtụtụ ụwa. Ọ nwere ngwa dị mfe ma dị mfe iji, na-enye ohere bipụta foto ọ bụla site na mkpanaka. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọzọ na-aghọ ikike nke Hofmann, na-enye gị ohere ibipụta foto 45 n'efu kwa ọnwa, naanị ị ga-akwụ maka ụgbọ njem. Na mkpokọta enwere foto efu 500 n'afọ niile.
Budata ngwa ndị a ma nwalee nke kacha mma maka mkpa gị, nwee otu ngwa mkpanaka na-eme ka usoro mbipụta akwụkwọ dịkwuo mfe. Anyị na-eji ozi ndị ọzọ laghachi na post na-esote. Krismas dị nso, ị ka nwere ike ịchọta onyinye zuru oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » Foto » Ngwa foto kacha mma nke izu
Ugreen, ngwa dị iche iche maka ngwaọrụ anyị
Jabra na -agba nzọ na Evolve2 75 maka gburugburu ngwakọ